Vimeo ले भिडियो मार्केट सेयर शेयर: ट्राफिक माथि २269 Traffic% | Martech Zone
आइतवार, सेप्टेम्बर 12, 2010 सोमबार, सेप्टेम्बर 13, 2010 Douglas Karr
हालसालै, म आफ्नो ग्राहकहरूको लागि भिडियोमा धेरै खोजी गर्दैछु। भिडियो अनलाइन अनुभव मा एक विशाल कारक बनिरहेको छ; वास्तवमा, त्यहाँ राम्रो मौका छ कि तपाईंको साइट पूर्ण रूपमा आगन्तुकहरूको राम्रो प्रतिशतले छोडिनेछ नभएसम्म तपाइँ भिडियो प्रदान गर्नुहुन्छ। नयाँ स्मार्ट फोनहरू पनि भिडियोको लागि अनुकूलित छन् र दर्शकहरू कराइरहेका छन्।
युट्यूब पहिले नै इन्टरनेट मा दोस्रो ठूलो खोज इञ्जिन हो। तर अन्य भिडियो प्लेटफर्महरू वर्षको बर्षमा ट्राफिकमा डबल-अंक वृद्धिको साथ धेरै राम्रो गरिरहेको छ। धेरै टाढा, यद्यपि, Vimeo दुई ठूला प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछाडि पार गर्दै - एकदम ठूलो कदमहरू बनाएको छ मेटाकाफे र Dailymotion। यहाँबाट पछिल्लो तथ्या .्कहरू छन् Compete:
भिडियो पनि खोज ईन्जिनको साथ एक कारक भइरहेको छ। गुगलले प्राय: भर्खरको भिडियो परिणामहरू छविहरूको साथ छरितो गर्दछ, नियमित खोज इञ्जिन परिणाम पृष्ठमा। प्लेटफर्महरू अधिक लचिलो हुँदै गइरहेका छन् ... यूट्यूबको भर्खरको परिक्षण अनुमति दिइएको कस्टम ल्यान्डि pages पृष्ठहरू र प्रयोगकर्ता अन्तर्क्रिया!
एसईओ क्षमताहरु को बाहेक, भिडियो दुई विपणन कारणहरूको लागि पास गर्न मात्र धेरै राम्रो छ:
भिडियोको क्षमता धेरै जटिल प्रक्रियाहरू वा अन्तर्क्रिया सजीलो वर्णन गर्न। किन छविहरू र पाठको माध्यमबाट बुझाउने प्रयास गर्नुहोस् जब तपाईं second० सेकेन्डको भिडियो गर्न सक्नुहुनेछ जुन निर्दोष छाप पार्छ।
भिडियोको व्यक्तिगत र प्रभावकारी रूपमा श्रोताको साथ कनेक्ट गर्न क्षमता। यदि चित्र एक हजार शब्दको लायक छ, भिडियो लाखौंको लायक छ।
म निश्चित छु कि Vimeo का कम लागत, उच्च गुणस्तर र मजबुत प्रस्तावहरूले यसको बृद्धि गर्दछ। व्यापार होस्टिंग हो Weekaa एक हप्ताको लागि अपलोड को 59Gb संग एक वर्ष। साइटले उत्कृष्टसँग उच्च परिभाषा प्लेब्याकको लागि अनुमति दिन्छ विश्लेषण र राम्रो डिजाइन गरिएको च्यानल पृष्ठहरू। हामीले भर्खर एक राखेका छौं DK New Media भिडियो च्यानल त्यो एकदम तेज छ। तिनीहरूले तपाईंको भिडियोको अन्तमा लिंकहरू अनुमति दिन्छन् र यसलाई सम्मिलित गर्दा तिनीहरूको लोगो हटाउँछ।
गोल्यत यूट्यूबको रूपमा जारी रहन्छ ... त्यसैले यदि तपाई बढि व्यक्तिहरु सम्म पुग्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईको पछाडिको मैदानमा खेल्नु पर्छ। यतिखेर, खेलबाट अरूलाई गणना नगर्नुहोस्! त्यहाँ धेरै अवसरहरू छन्।
टैग: एक्सेंचरब्लग विवरणउत्प्रेरकअर्डर गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्फेसबुक डेमोग्राफिक्ससाइटsocialiteभिडियो ल्यापटपदृश्य
तपाइँको आगन्तुकहरु लाई लुकाउन रोक्नुहोस्